Admin Manager | Job in Myanmar ﻿
16.4.2019, အချိန်ပြည့် , Automotive
ကုမ္ပဏီ: General Arr Mhan Thit Co., Ltd (Hyundai Truck & Bus)
Any graduate. Prefer Business Management Degree or Diploma holder.
At least5years experience as Admin Manager role from the same industry.
Excellent communication skill, time management and leadership skill.
အလုပ်တည်နေရာ Shwe Lin Ban Industrial Zone, Hlaing Thar Yar.
Job details အလုပ်အမျိုးအစား: Motoring & Automotive jobs
သက်ဆိုင်ရာ ရာထူးအမည်: Admin Manager
2 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Automotive
အမျိုးအစားအလိုက် အလုပ်ကြော်ငြာများ Airline & Automobile jobs နှင့် နေရာဒေသရှိ Mandalay Region
4 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , 200 000 - 300 000 Ks, Automotive
5 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Automotive
•	Automotive sale and marketing. •	Can create and maintain strong customer relationships . •	Can participate when occasional promotion campaigns occur.
6 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Automotive
အမျိုးအစားအလိုက် အလုပ်ကြော်ငြာများ Motoring & Automotive jobs နှင့် နေရာဒေသရှိ Yangon (Rangoon)
39 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Automotive
Senior Accountant F (1)
Service ဌာန၏ နေ့စဉ် အသုံးစရိတ်များနှင့်ပတ်သက်၍ စီမံခန့်ခွဲဆောင်ရွက်ခြင်း Advance, Petty Cash, Procurement expense ရှင်းတမ်းများအား စိစစ်၍ ရုံးချုပ်သို့တင်ပြခြင်း Cashier နှင့် Junior Accountant များ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ ပံ့ပိုးကြီးကြပ်� ...
46 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Automotive
48 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Automotive
55 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Automotive
56 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Automotive
88 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , 400 000 - 500 000 Ks, Automotive
91 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Automotive
95 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Automotive
110 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Automotive
125 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Automotive
144 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Automotive
245 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Automotive
245 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , 500 000 - 800 000 Ks, Automotive
318 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Automotive
322 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Automotive
Motoring & Automotive jobs Motoring & Automotive jobs Admin Manager မြန်မာနိုင်ငံရှိ အလုပ်များ၊ ရန်ကုန်ရှိအလုပ်များ
Work in မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး(468)
How many years of experience do you have as admin manager?
Yangon (Rangoon) 76 နေ့များ
Yangon (Rangoon) 81 နေ့များ